Iyo itsva vhezheni yeLibreOffice 6.0.5 yaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeLibreOffice 6.0.5 yaburitswa
Mazuva mashoma apfuura Tiye Gwaro Foundation (TDF) yakazivisa kuwanikwa kweshanduro nyowani yeLibreOffice 6.0.5, iyo ingave yekuvandudza yechishanu yeiri vhezheni vhezheni yeiyi Ofimatica package.
Kune avo vasati vaziva LibreOffice, uyeIyi hofisi suite iyo ine akati wandei zvirongwa mukabhuku yayo Pakati pedu patinowana Munyori uyo anoitirwa kugadzirisa zvinyorwa uye kuvapfumisa, Calc ispredishiti software, yakafanana neMicrosoft Excel, Impress yakanangana nekubata mharidzo uye masiraidhi, Base chirongwa chinotibvumidza kugadzira uye manejimendi edhatabhesi.
1 Nyowani LibreOffice yekuvandudza
1.1 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa?
1.2 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Fedora, CentOS, openSUSE uye zvigadzirwa?
1.3 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Arch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa?
1.4 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 uchishandisa SNAP?
Nyowani LibreOffice yekuvandudza
Mwedzi nehafu mushure mekuburitswa kweLibreOffice 6.0.4, lYechishanu yekuvandudza yeLibreOffice bazi 6.xx yakaitwa kuti iwanikwe kune vakajairika vashandisi nekuitwa kwekambani.
Iyo Gwaro Foundation yakachinja chimiro chechazvino vhezheni yeayo hofisi suite. Izvi zvakaitika nekuburitswa kweLibreOffice 6.0.5. Uku ndiko kushandurwa kwechishanu kwakakura kuchirongwa, uko kwakawanda kwenyaya dzakagadziriswa.
Ndokusaka pasuru yakaitwa yeruzhinji. Izvi zvinoreva kuti inogona zvakare kuiswa nevashandisi mumakambani nemakambani, uko kusvika zvino zvave kuodzwa moyo.
Iyo Gwaro Foundation inotaura kuti LibreOffice 6.0.5 inogona zvakare kumisikidzwa zvinobudirira munzvimbo dzekugadzira. LibreOffice 6.0.5 inogadzirisa akawanda madhigi muzvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira Munyori, Calc, Impress, Dhonza, Math, uye Base.
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa?
Kuti ugone kuisa iyi nyowani vhezheni yeLibreOffice pane yedu system Tinofanira kutanga tabvisa vhezheni yapfuura kana tiinayo, Izvi ndezvekuti tidzivise matambudziko anotevera, nekuti izvi isu tinofanirwa kuvhura terminal nekuita zvinotevera:
Ndatoita izvi isu tinofanira kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uko muchikamu chako chekurodha tinogona tora package kukwanisa kuiisa mune yedu system.
Kana kurodha pasi kwapera, isu tinosunungura izvo zvirimo mupakeji ichangobva kutengwa ne:
Isu tinopinda dhairekitori rakagadzirwa mushure mekuburitsa zip, mune yangu iri iyo 64-bit:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Fedora, CentOS, openSUSE uye zvigadzirwa?
Kana eIwe urikushandisa system ine rutsigiro kuti ukwanise kuisa rpm mapakeji, iwe unogona kuisa iyi nyowani nyowani nekuwana iyo rpm package kubva papeji rekurodha pasi kubva kuLibreOffice.
Yakawanikwa pasuru dtinomanikidza ne:
E tinoisa ne:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 pane Arch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa?
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.0.5 uchishandisa SNAP?
Pari zvino chinokanganisa chete ndechekuti iko kunyorera hakuvandudzwe ipapo ipapo saka unogona chete kumirira mazuva mashoma kuti ivandudzwe kuiisa.
Kana iwe uchida kuziva ruzivo rwe shanduko dzinoitwa mune iyi nyowani vhezheni inogona kuwanikwa pano y pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo itsva vhezheni yeLibreOffice 6.0.5 yaburitswa
Rakanaka kwazvo kuburitswa !!.
Ini ndakangoisa asi iri muchirungu.
Ndinoipfuudza sei kuSpanish? Kwaziso. Mario